Manohitra ny fakam-panahy
"Ka dia maneke an'Andriamanitra hianareo; ary manohera ny devoly, dia handositra anareo izy" - Jak. 4: 7.
Mbola manatona mandrakariva ny zanak'olombelona amin'ny fakam-panahiny i Satana. Ampiasainy ny fomba rehetra eo am-pelatanany mba tsy hahitan'ny olona azy, ary izany no mahatonga ny olona maro tsy hahalala ny famitahana ataony. Andro vitsivitsy lasa izay no nisy nametraka tamiko ny fanontaniana hoe: "Mino ve ianao fa misy ny devoly?" "Eny," hoy aho. Dia hoy ilay nanontany ahy: "Tsy mino aho fa misy ny zava-manan'aina toy izany; ny fisainan-dratsintsika sy ny fironan-dratsintsika no atao hoe devoly!" "Kanefa," hoy aho "iza no nanome anao izany hevitra izany? Avy aiza izany, moa tsy avy amin'i Satana va?" Azo antoka toy ny ananantsika Mpamonjy ny fisian'ny fahavalontsika. Ratsy fanahy sady fetsy izy, ary manara-maso mandrakariva izay ataontsika ka manao teti-dratsy hahavery antsika. Tena mahavita miasa izy rehefa tsy miseho mivantana. Rehefa mihevitra ny saina fa tsy misy izy, dia amin'izay izy no tena miasa be indrindra. Amin'ny fotoana tsy anampoizantsika ny fanatrehany indrindra no ananany tombony amintsika. Mampivarahontsana ahy ny mahita ireo tanora maro voababony kanefa tsy mahalala izany akory. Raha hitan'izy ireo ny loza mananontanona azy, dia handositra ho eo amin'i Kristy, izay fialofana ho an'ny mpanota, izy ireo. — YI, 21 Novambra 1883
Kendreo ny ho mpianatra mahatoky ao amin'ny sekolin'i Kristy, ka mianara isan'andro ny hampifandrindra ny fiainanao amin'ny fenitr'Andriamanitra. Atodiho any an-danitra ny masonareo, ary mihazakazaha mankany amin'ilay lokan'ny fiantsoana anareo ao amin'i Kristy Jesôsy . Tanteraho amim-paharetana ny fihazakazahana kristianina, ary mijoroa raha tojo fakam-panahy, na mampahory toy inona aza izany. Manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra; ary raha misafidy ny hanao ny dingana voalohany ianareo dia ho hitanareo ny tanany hitsotra mba hanampy anareo. Miankina aminareo isam-batan' olona ny safidy handeha amin'ny fahazavan'ilay Masoandron'ny Fahamarinana, na handeha amin'ny haizin'ny hevi-diso. Ho fitahiana ho anao ny fahamarinana raha toa ka havelanao hanadio ny fanahinao ny hery miasa mangina ananany. YI, 30 May 1895.